Akụkọ - Ọtụtụ ụkpụrụ nke mbido abrasive nhọrọ
Ọtụtụ ụkpụrụ nke mbido abrasive nhọrọ
Ngwurugwu nchara dị ebe niile, oge niile
Iji gbochie nchara nchara, usoro kachasịsịsịsịsịsịsị iche bụ iji ihe mkpuchi kpuchie elu ngwaahịa ngwaahịa. A ghaghị ikpochasị elu tupu mkpuchi mkpuchi. Ọtụtụ narị ngwaahịa na ụlọ ọrụ gụnyere ụgbọ mmiri, tankị nchekwa, àkwà mmiri, ihe owuwu ígwè, ọdụ ike, ụgbọ ala, locomotives, akụrụngwa ndị agha, akụrụngwa aerospace, wdg. Metal abrasive bụ ihe kasị dị irè ihicha usoro.
Ngwunye abụrụ igwe
Ohaneze, enwere gbaa ígwè gbaa (elu carbon ígwè shot na obere carbon ígwè shot), ígwè grit, ogbugba ogbugba, iron grit, igwe anaghị agba nchara bekee gbanye / conditioned shot, igwe anaghị agba nchara, ígwè ịkpụ waya, na-ebu nchara nchara, wdg abrasives igwe eji arụ ọrụ nke ọma anaghị adị mfe ịkwụsị, obere uzuzu, obere oriri, arụmọrụ dị elu na arụmọrụ zuru oke nke ngwaahịa. Ọ nwere ike belata oke oriri nke onye ọrụ njedebe, si otú ahụ belata mmefu yana belata mbupute.
Ajụjụ bụ, olee otu esi ahọta igwe eji achọ mma dị elu?
Iji hụ na nsonaazụ ọgwụgwọ elu bụ ihe zuru oke, ọkọlọtọ isi ihe abụọ nke abrasives metal: nhicha arụmọrụ na oriri.
Ọtụtụ nghọtahie na nhọrọ nke nkedo nchara:
Ihe nkedo a na-agba agba gburugburu ka mma?
Ngwurugwu ahụ dị otu edo, nke ka mma?
Dị ọdịdị ahụ na-enwu gbaa, ka mma?
Na usoro nke ịkpụzi na ịkwadebe agbapụ nchara, nchara a wụrụ awụ na-ajụ oyi site na mmiri mmiri ruo na nke siri ike, ma na-adalata n'oge usoro jụrụ oyi. A na-eme mbelata a na steeti nweere onwe ya, ọ nweghịkwa riser dị ka ịwụnye ihe ọgbụgba iji mejupụta ya na nchara a wụrụ awụ ebe a na-ebelata olu mgbe shrinking belata, yabụ ihe ndị elliptical na mbara ala na-apụta. Kinddị ihe ndị a emeela shrinkage zuru oke, na ọdịdị ahụ abụghị okirikiri mana nhazi ahụ dị oke. Otú ọ dị, ọ bụrụ na nchara nchara nke enwetabeghị n'ụzọ zuru ezu, ihe owuwu ahụ adịghị oke, enwere ntụpọ dị n'ime dịka shrinkage porosity na shrinkage cavities.
Gbanye ike E = 1 / 2mv2, ọ bụrụ na ihe owuwu ahụ dị oke, yana otu olu ahụ, ogo dị elu nke M bụ, ike nrụpụta buru ibu, ọ dịkwa mfe ịgbaji. Zọ a, ọ bụ ezighi ezi: ígwè rounder gbagburu ka mma.
Ọka ọka nke ígwè ahụ gbanwere karịa, nke ka mma?
Na ubi nke ihicha, elu nke workpiece a ga-ọcha ma ọ bụ spraying ga-etolite olulu na kpochara elu. Naanị mgbe olulu na olulu dabara kpamkpam, a ga-ehicha elu ya dum.
Ihe nkedo nke ihe nchara ígwè bu ihe di ogologo, ogologo oge ka o ruru iji zuru oke nke olulu. Maka nchara nchara na ngwakọta ngwakọta ụfọdụ, nnukwu nchara nchara na-ejikarị nhicha, na obere nchara nchara. ga-ehichapụ interspace n’etiti ebe nnukwu nchara nchara gbanwere
Ugbu a, e nwere ụdị abụọ nke elu carbon ígwè shot: otu quenching ígwè shot na abụọ quenching ígwè shot. O siri ike ịmata ọdịiche dị na nke ihe mejupụtara, ekweghị ekwe, na nhazi metallographic. Otú ọ dị, okpukpu abụọ nke ịgba nchara nwere ezigbo ọka na ndụ ike ọgwụgwụ, mkpụrụ nke otu nchara nchara na-adị njọ ma ike ọgwụgwụ na-adị ala. elu ahụ dị gịrịgịrị, o yiri ka ọ na-enwu gbaa; mgbe nchara nchara mgbe usoro ọgwụgwọ nke abụọ a ， ihe nkiri Fe3O4 dị n'elu na-ebuwanye ibu, anaghị egosipụta ìhè, ọ dịghịkwa egbuke egbuke. Ya mere, na-enwu gbaa enwaghị adịghị mma ngwaahịa, ma ọ bụrụ na ọ bụ okpukpu abụọ quenching ígwè shot ma ọ bụ bụ ihe dị mkpa nke.